Xashiishadda Caafimaadka ee Nebraska - Shuruucda iyo Xeerarka Cannabis ee Nebraska
Shuruucda Xashiishadda ee Nebraska
Xashiishadda Caafimaadka ee Nebraska | Shuruucda Xashiishadda ee Nebraska
Xashiishadda caafimaadka ee Nebraska ayaa miro dhalan doonta sanadka 2020. Nebraskans waxay u codayn doonaan hindisaha caafimaad ee marijuana bisha Nofembar. Seth Morris ka Sharciga Berry ku soo biiray si uu noogu sheego wax kasta oo aan u baahan doono inaan ka ogaanno suuqa MMJ ee Nebraska.
Dhageyso bartayada 'PodCast' Sharciyeynta Cannabis ama La soco YouTube-ka cinwaankiisu yahay Xashiishadda Caafimaadka ee Nebraska | Shuruucda Xashiishadda ee Nebraska oo ay la socdaan Qareenka Cannabis Cannabis Seth Morris macluumaad la xiriira.
LA XIDHIIDH BADAN: Sharciyada Koonfurta Dakota Marijuana
LA XIDHIIDH BADAN: Isticmaalka Xannaanada Qaangaarka ee Pennsylvania
Ma xiisaynaysaa kaqaybgalka warshadaha xashiishadda?
Maariwaanada Caafimaadka ee Nebraska
Nebraska wuxuu ku dhow yahay inuu sharciyeeyo marijuana caafimaad kadib ururinta qiyaastii 182,000 oo saxiix ah oo loogu talagalay olole codsi, 60,000 saxiix ka badan inta loo baahan yahay, si loogu dhigo hindisaha wax ka beddelka November codbixinta.
Ololahan oo uu hogaaminayo Nebraskans ee Marijuana Caafimaadka ku dari lahaa Qodobka XIX ilaa kan Dastuurka Nebraska u oggolaanshaha dadka waaweyn, iyadoo lagula taliyo takhtar shati haysta ama kalkaaliye caafimaad, inay isticmaalaan, haystaan, iibsadaan, soona saaraan marijuana si loo yareeyo xaalad caafimaad oo daran.
Waxay sidoo kale, u oggolaan lahayd carruurta, da'doodu ka yar tahay 18 sano, iyadoo lagu talinaayo dhakhtar shati haysta ama kalkaaliye caafimaad iyo oggolaanshaha waalid ama ilaaliye sharci ah oo mas'uul ka ah go'aannada daryeelkooda caafimaad, inay isticmaalaan marijuana si ay u yareeyaan xaalad caafimaad oo daran. Waalidiinta carruurta isticmaala marijuana caafimaad ayaa loo oggolaan doonaa inay lahaadaan, iibsadaan, soona saaraan marijuana si loo yareeyo xaaladda caafimaad ee ilmahooda.
Qiyaasta cod-bixinta ayaa u oggolaan doonta Sharci-dejinta Gobolka ee Nebraska inay qeexdo xeerarka lagu maamulo barnaamijka dawada-marijuana ee gobolka.
Wax ka beddelka sharciyeynta Marijuana Caafimaadka ee Nebraska
Qeexida xashiishadda: Wax ka beddelka ayaa qeexaya cannabis, ujeeddooyinka sharciyeynta, sida:
Dhammaan qaybaha geedka xashiishka, ha ahaadaan kuwo kora ama ha kordho, iniinyadooda, cusbada laga soo saaray qayb kasta oo geedka ka mid ah, iyo iskuxir kasta, soo saarid, milix, soosaarid, isku dar, ama diyaarinta geedkaas oo kale, iniintiisa , ama cusbadiisa ”
Ruqsad siinta: Wax ka beddelku wuxuu tixgelinayaa safarka rukhsadda ee beeralayda, soo saarayaasha, iyo kuwa kale, laakiin faahfaahintu way yar tahay iyadoo la siinayo golaha sharci dejinta si ay u dejiyaan xeerarka macquulka ah ee la raacayo.
“Qeyb-hoosaadkaani kama hor istaagi doono shatiga deg-degga ah iyo sharciyeynta macquulka ah ee [beeraleyda, soo saarayaasha, iwm.] Qawaaniinta noocan ah iyo ruqsad siinta ma saareyso culeys xad dhaaf ah awooda shakhsiyaadka loo idmaday inay isticmaalaan xashiishadda sida ku xusan qeybtaan si ay u helaan nooca iyo tirada xashiishka, waxyaabaha xashiishka la xiriira, iyo qalabka la xiriira xashiishadda ay u baahan yihiin. ”
Canshuuraha ku saabsan marijuana caafimaad: Wax ka beddelkaan ma dejinayo canshuuraha marijuanaada caafimaadka ee gobolka Nebraska
Isticmaalka marijuana caafimaad: Hindisaha ma ogola isticmaalka dadweynaha, mana u oggolaanayo wadista naafada ee sarkhaansan daroogada cannabis.
Xuquuqda loo shaqeeyaha: Wax ka beddelkani wuxuu u oggolaanayaa loo-shaqeeyayaasha inay ka xaddidaan shaqaaluhu inuu shaqeeyo inta uu ku liito xashiishadda caafimaad.
Sharciga Marijuana ee hadda ka jira Nebraska
Tani waa xaaladda arrimaha ee gobolka CornHusker, sida laga soo xigtay Mashruuca Siyaasadda Marijuana:
Haysashada ayaa hadda sharci darro ka ah Nebraska. Haysashada hal ounce ama wax ka yar waa xadgudub, kaas oo lagu ciqaabayo ugu badnaan ganaax dhan $ 300, garsooruhuna wuxuu ku amri karaa dembiilaha inuu dhammaystiro koorsada waxbarashada daroogada. Xukunka labaad ee lahaanshaha hal ounce ama wax ka yar waa dambi ciqaab ah oo lagu ciqaabo ugu badnaan $ 500, iyo tan saddexaad iyo dambiyada ku xiga ee haysashada hal ounce ama wax ka yar waa dambi xumo waxaana lagu ciqaabayaa ugu badnaan ciqaab ah toddobo maalmood oo xarig ah iyo ganaax ugu badan oo ah $ 500. Beerista lama oggola. Ciqaabta beerashada ee Nebraska waxay ku saleysan tahay miisaanka guud ee dhirta la helay. ”
Ka soo horjeedka wax ka beddelka sharciyeynta marijuana caafimaad ee Nebraska
In kasta oo taageero aad u ballaadhan ay tallaabadani ka heshay dhammaan saxiixayaasheeda, haddana qariib kuma ahayn dhalleeceynta. Kadib markay la kulantay caqabado badan oo ku saabsan xusuusta saxeexyada mahadnaqa faafida, hada la soo bandhigay, waxay noqotay bartilmaameed ay uga hortagaan tirooyin badan.
Ma aha oo kaliya sameeyey Gov Pete Ricketts wuxuu ka hadlayaa tallaabada hindisaha shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Lincoln, isagoo yiri "Ma jiro wax la yiraahdo marijuana caafimaad. Tani maahan wax dhakhtar qori lahaa. Looma qaybin doono farmasiga. Kuwani waa shaybaarro laga heli karo bulshadaada. ”
Caqabad ku ah cod-bixinta ayaa sidoo kale loo gudbiyay maxkamadda, iyada oo ku doodaysa in qoraalka la soo jeediyay uu jebiyey xeerarka gobolka ee u baahan tallaabooyinka cod-bixinta si ay diiradda u saaraan hal su'aal. Joogtaynta in cabirku keenayo laba su'aalood oo kala duwan: haddii deggeneyaashu xaq u leeyihiin inay u isticmaalaan marijuana arrimo caafimaad, iyo in shirkadaha gaarka loo leeyahay loo oggolaado inay koraan oo ay iibiyaan.
Iyadoo aan loo eegin ujeeddooyinkan si loo joojiyo codeynta cabirka bisha Nofeembar, taageerayaasha sharciyeynta waxay ku kalsoon yihiin in cabirku ka badbaadi doono go'aanka maxkamadda oo uu dhaafi doono cod-bixinta Nofeembar.
Full text ee wax ka beddelka dastuurka ee sharciyeynta marijuana caafimaad ee Nebraska
Ku dar qayb cusub 1 qodob cusub XIX:
XIX-1 (1) Qofka siddeed iyo toban jirka ah ama ka weyn, haddii uu kugula taliyo takhtar shati haysta ama kalkaaliye caafimaad, wuxuu xaq u leeyahay isticmaalka, lahaanshaha, helitaanka, iibsashada, iyo inuu si ammaan iyo xikmad leh u soo saaro xashiishad ku filan, waxyaabaha xashiishadda laga soo saaro, iyo qalabka la xiriira xashiishadda si loo yareeyo xaalad caafimaad oo daran. Qofka noocaas ah waxaa ku caawin kara daryeel bixiye adeegsiga xuquuqdan.
(2) Qofka da'diisu ka yar tahay siddeed iyo toban sano jir, haddii uu kugula taliyo takhtar shati haysta ama kalkaaliye caafimaad iyo ogolaanshaha waalid ama ilaaliye sharci ah oo mas'uul ka ah go'aannada daryeelka caafimaadka ee qofka noocaas ah, wuxuu xaq u leeyahay inuu isticmaalo xashiishad, xashiishad alaabooyinka, iyo qalabka la xiriira xashiishadda si loo yareeyo xaalad caafimaad oo daran. Qofka noocan oo kale ah waxaa caawin kara waalid, ilaaliye sharci, ama daryeel bixiye, kaas oo yeelan kara, marin u heli kara, iibsan kara, isla markaana si ammaan ah oo xikmad leh u soo saari kara sahayda xashiishka, waxyaabaha xashiishadda, iyo qalabka la xiriira xashiishadda isagoo metelaya qofka.
(3) Xuquuqda lagu ilaaliyay qaybaha (1) iyo (2) ee qaybtaan waxaa ka mid ah xuquuqda helitaanka ama iibsashada xashiishka, waxyaabaha xashiishadda, iyo qalabka la xiriira xashiishadda ee hay'adaha gaarka loo leeyahay. Hay'adaha gaarka loo leeyahay iyo wakiillada ku shaqeeya magaca hay'adaha Gobolka Nebraska way kori karaan, kobcin karaan, shaqeyn karaan, hantiyi karaan, qaadi karaan, iibin karaan, tijaabin karaan, ama wareejin karaan xashiishadda, alaabada xashiishka, iyo qalabka la xiriira xashiishka ee iibka ama geynta shaqsi loo idmaday inuu isticmaalo xashiish hoosaadka (1) ama (2) ee qaybtaan.
(4) Shakhsiyaadka ama hay'adaha ku hawlan ficillada loo oggol yahay, ama ku dhaqma xuquuqda ay ilaalinayaan qaybtani ma muteysan doonaan xarig, dacwad qaadis, ama ciqaab madani ama ciqaabeed sida uu dhigayo sharciga gobolka ama degmada, marka laga reebo in ciqaab macquul ah lagu soo rogi karo xadgudub kasta oo sharciyo macquul ah, xeerar, iyo qawaaniin la soo saaray iyadoo la raacayo farqada (5) ee qaybtaan.
(5) (a) Xuquuqda qaybtan lagu ilaalinayo waxay ku xirnaan doontaa oo keliya sharciyada, qawaaniinta, iyo xeerarka macquulka ah ee kor u qaadaya caafimaadka iyo nabadgelyada shakhsiyaadka loo idmay inay isticmaalaan xashiishadda sida ku xusan qaybtaan; hubinta in ay sii socdaan shakhsiyaadka noocaas ah nooca iyo tirada xashiishadda, waxyaabaha xashiishka, iyo qalabka la xiriira xashiishadda ay u baahan yihiin; iyo ka hortagga sharci darrada loo leexsado xashiishadda. Shuruucda, qawaaniinta, ama qawaaniinta noocan ahi culeys aan saarnayn kuma saaraan ku dhaqanka xuquuqda ay ilaalinayaan qaybtaan.
(b) Qeybtan kama hor istaageyso shati deg deg ah iyo sharciyeynta macquulka ah ee hay'adaha iyo wakiilada ku shaqeeya qeybta (3) ee qeybtaan Qawaaniintaan iyo shati siinta ma ahan inay culeys saa'id ah saaraan awooda shakhsiyaadka loo idmay inay isticmaalaan xashiishadda sida ku xusan tan qaybta si ay u helaan nooca iyo tirada xashiishadda, alaabada xashiishka, iyo qalabka la xiriira xashiishadda ay u baahan yihiin.
(6) Qeybtaan looma fasiri karo: (a) U oggolow in lagu dhex cabbo xashiishka dadweynaha; (b) Waxay u baahan tahay xarig ama faci dhaqan celin ahdaboolka si loogu oggolaado haysashada ama isticmaalka xashiishadda goobahaas; (c) U oggolow hawlgalka baabuurta inta uu ku liito xashiishku; ama (d) Haddii kale u oggolow ku lug yeelashada ficil ahaan dayacaad ah in la sameeyo iyadoo ay itaal daran tahay xashiishka.
(7) Qeybtaan uma baahna shaqo-bixiye inuu u oggolaado shaqaale inuu shaqeeyo intuu tabar daranyahay xashiishadda.
(8) Qeybtaan uma baahna shirkad caymis bixiya inay bixiso caymiska isticmaalka xashiishka.
(9) Ujeeddooyinka qaybtaan, xashiishka waxaa loola jeedaa dhammaan qaybaha geedka xashiishka, ha ahaado mid koraya ama aan kordhin, iniinyadiisa, cusbada laga soo saaray qayb kasta oo geedka ka mid ah, iyo iskuxir kasta, soo saarid, cusbo, soosaarid, isku dar ah, ama diyaarinta geedka noocaas ah, iniinyadiisa, ama xarkooda.
Haddii cabirkani dhaafo Nebraska wuu ku biiri lahaa Oklahoma, Missouri, iyo Utah oo ku jira liiska dawladaha ansixiyay dadaalkooda marijuana ee caafimaad ee codbixiyeyaasha sanadkan
Akhriso Wax ka beddelka Dastuurka ee Marijuana Medical Marijuana
Soogalootiga at Sharciyeynta Cannabis